ရွှေဘို ငလျင် လူ ၆ ဦးထက် မနည်း သေဆုံး | ဧရာဝတီ
မန်းသားလေး| November 11, 2012 | Hits:1
| | စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဘက် ၄၅မိုင်ခန့်အကွာ ကျောက်မြောင်းကို ဗဟိုပြုပြီး ရစ်ခ်ျတာစကေးလ် ၆.၈ အဆင့်ရှိ ငလျှင်တခု လှုပ်ခဲ့သည်။ (မြေပုံ-U.S. Geological Survey)
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဘက် ၄၅မိုင်ခန့်အကွာ ကျောက်မြောင်းကို ဗဟိုပြုပြီးရစ်ခ်ျတာစကေးလ် ၆.၈ အဆင့်ရှိ ငလျှင်တစ်ခု ယနေ့နံနက် ၇နာရီ ၄၂မိနစ် ၃၇စက္ကန့် လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် သေဆုံးသူ ၆ဦး ရှိခဲ့သည်။
သေဆုံးသူများမှာ ကျောက်မြောင်းနှင့် စဥ့်ကူးဆက်နွယ်သော မြစ်ကူးတံတားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် သေဆုံးသူ ၂ ဦး၊ စဥ့်ကူးမြို့ ကျည်တောက်ပေါက် စားသောက်ဆိုင်တွင်သေဆုံးသူ ၂ဦး၊ စဥ့်ကူးမြို့နယ် နွယ်ရုံကျေးရွာတွင် သေဆုံးသူ ၁ဦးနှင့် မန္တလေးမြို့ သွေးလန့်သေဆုံးသူ ၁ဦးစုစုပေါင်း ၆ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းမြေငလျှင်မှာ မန္တလေးမြေငလျှင်စခန်း မှ မြောက်ဘက် ၈၂မိုင်ခန့်အကွာ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ရွှေဘိုမြို့မြောက်ဘက် ၄၅မိုင်ခန့်အကွာ ဗဟိုပြုပြီး အင်အားပြင်းထန် အဆင့် ၆.၈ ရစ်စကေး လှုပ်ခတ်သွားပြီးယင်းငလျှင်သည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွှေ့ကြောပေါ်တွင် လှုပ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနက ဧရာဝတီကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ငလျှင်ကြောင့် ကျောက်မြောင်းနှင့် စဥ့်ကူးဆက်နွယ်သော ရတနာသိင်္ခ ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား တိုင်အမှတ်MP2နှင့် MP3 ဆောက်လက်စ ငြမ်းများပြိုကျပြီး လုပ်သား၂ ဦး (အရပ်သားတဦး၊ ဝန်ထမ်းတဦး)သေဆုံးပြီး ၁၆ဦး ဒဏ်ရာရကာ ၅ဦး ပျောက်ဆုံးလျှက် ရှိကြောင်း ရွှေဘိုခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလှဦးက ပြောကြားသည်။
“ငလျှင်က တအားပြင်းတယ်ဗျ။ တံတားကတော့ ဆောက်လုပ်စမို့ သံချောင်းတွေကအခိုင်မာမရှိသေးဘူးလေ။ တစ်ယောက်ကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး သေတာ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပြိုကျတဲ့ အဆောက်ဦးပိပြီး သေတာပါ” ဟုဦးလှဦးကပြောသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ဆောင်နေသော သဘောင်္နှစ်စင်းလည်းရေထဲသို့ မြှပ်သွားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသဘောင်္ကို ပြန်လည်ဆည်ယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရသည်။
စဥ့်ကူး ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်များအရလည်း ကျည်တောက်ပေါက် စားသောက်ဆိုင် ပြိုကျရာ လူ ၂ဦးသေဆုံးပြီး နွယ်ရုံကျေးရွာတွင်လည်း တံတိုင်းတခု ပြိုရာတွင် ၁ ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။စဥ့်ကူးတွင် ဗလီတစ်ခု ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် စာသင်ကျောင်းများ အက်ကွဲပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“ကျနော် အခု အသက် ၄၀ အထိ ကုန်ခဲ့သမျှ ငလျင်ထဲမှာ ဒီတစ်ခါ အပြင်းထန်ဆုံးပဲ။ မန္တလေးက အဆောက်အဦတွေမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်တာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီတကြိမ် ငလျင်ဟာ မန္တလေးက အင်ဂျင်နီယာလောကကို သတိပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။ အရင်က ငလျင်ဇုံ အဆင့် ၄ ထဲမှာရှိနေတာမို့ အဆောက်အဦးဆောက်တဲ့အခါ ငလျင်ဒဏ်ကိုပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ကြရပါတယ်။ ရှေ့ ပိုပြီး သတိထားရပါတော့မယ်” ဟု မန္တလေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုဇင်မင်းဆွေက ပြောသည်။
အဆောက်အဦတင်မကပဲ အဆောက်အဦမှာ အသုံးပြုသော မှန်၊ အလူမီနီယံရဲ့ အရည်အသွေးကအစဂရုစိုက်ရန်လိုနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကိုဇင်မင်းဆွေက ပြောကြားသည်။
စဥ့်ကူးမြို့နယ်တွင် ရွှေဂူကြီးဘုရား မုခ်ဦးတစ်ခြမ်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီး ယင်းရှိ အခြေခံ မူလတန်းကျောင်း ရှိကျောင်းဆောင်တဆောင် ပြိုကျပြီး အုတ်တံတိုင်းပေ ၃၀၀ ခန့် ပြိုကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင်ရွှေကြက်ယက်တောင်ဘုရား တံခွန်တိုင်နှင့်မုခ်ဦး၊ တောရကျောင်းတိုက်ရှိ အုတ်တံတိုင်း ၅ ခန်း၊ ပရိယတ္တိ သတ္တမ ၀ံသနန္ဒာကျောင်းတိုက်ရှိ အုတ်တံတိုင်းပေ ၆၀၀ ခန့် ၊ ရွှေယက်တောင်ဘုရားရှိ တံခွန်တိုင်နှင့်မုခ်ဦးလည်း ပြိုကျခဲ့သေးသည်။ အမှတ်၂ ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ် တစ်လုံးပြိုကျပြီး လူ ၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိသော အရေအတွက်ကို အခြေခံပြီး သေဆုံးသူ ၁၃ ဦး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၄၀ ဦး ရှိကြောင်း Save The Children က ပြောဆိုသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Thiha Soe November 11, 2012 - 6:42 pm	May all be happy and healthy.
Reply	antonio November 11, 2012 - 7:29 pm	မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများ ပိုမိုသတိထားသင့်သောအချက်ဖြစ်သည်။
Reply	thuratun November 11, 2012 - 8:12 pm	စိတ်မကောင်းစရာပါ၊တိုင်းပြည်မှာမင်းဆိုးမင်းညစ်တွေစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေသမျှတော့ ပြည်သူက
Reply	Moe Moe November 12, 2012 - 10:02 am	မဆိုင်ပါဘူး၊ မဆိုင်ဂလိုင်နဲ့ခေါက်
Reply	pps12345 November 11, 2012 - 9:40 pm	ငလျင် သည် မြန်မာပြည်အတွက် အန္တရယ် ပေးနေပါပြီး မြန်မာပြည် သည် fault line ကြီးများပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ သို့သော် ငလျင်ဒဏ် ကာကွယ်ရေးမှာ အားနည်းနေပါသည်။
နိုင်ငံတိုင်းတွင် အဆောက်အုံ ဆောက်လုပ်ရာတွင် ငလျင်ဒဏ် ကို ကာကွယ်နိုင်မှု အဆင့်အတန်းများသတ်မှတ် ကာတည်ဆောက် ကြပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ အရေးပါသောအဆောက်အအုံများကို နှစ်ပေါင်းများစွာမှာ တစ်ခါလာတတ်သော ငလျင် လှုပ်လျှင် အနည်းငယ်သာပျက်စီးပြီး ပြန်ပြင်နိုင်အောင် ထိုဒေသ၏ မျှော်မှန်း ငလျင် ပမာဏ ထက်မြင့်သော ငလျှင်ကို ခံနိုင်အောင်၊ သာမန် လူနေ အဆောက်အအုံများကို ထိုဒေသ၏ မျှော်မှန်းငလျှင်ကို ခံနိုင်အောင် နှင့် ပြိုကျမှု နည်းစေရန် တွက်ချက် တည်ဆောက်နေပါသည်။သဘာဝ ဘေးများ ကျရောက်လာပါက အစိုးရ အဆောက် အအုံများကို ကယ်ဆယ်ရေး အတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် နှင့် အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမို အာရုံစိုက်နိုင်စေရန် နှင့် အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား မရပ်သွားစေ ရန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းများ အရ ရဲစခန်းများ နှင့် အစိုးရ ရုံးများ ပြိုကျ မှု များ နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နေပြည်တော်သည်လည်း အစိုးရရုံးများကို တောင်စောင်းများတွင် ဆောက်လုပ်ထားသဖြင့် အကယ်၍ တိုင်းပြည်တွင် ကြီးမားသော ငလျှင်လှုပ်ပါက ပြိုကျစေနိုင်ပါသည်။
ဈေးကွက်ထဲတွင် ပြည်တွင်းမှ induction furnace များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော သံချောင်းများကို ရောင်းနေပါသည်။ ၎င်းသံချောင်းများသည် homogeneous မဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ပမှ electric arc furnace များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော သံချောင်းများထက် ကွာလတီများစွာ လျှော့နည်းပါသည်။
Structure ပိုင်းအရ joint များတွင် ငလျှင်ဒဏ်ကြောင့် bird case များ မဖြစ်ပေါ်စေရန် elasticity များစေရန် tie bar များ များထည့်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မန္တလေးမြို့၏ အဆောက်အဦ အများစုမှာ rigidity center and weight center ထပ်တူ ကျမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုအချက်များကို အစိုးရပိုင်းမှ ကန်ထရိုက်ထာများ ဒီဇိုင်နာများ ကို လိုက်နာစေရန် တွန်းအားပေးသင့်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ တွင် mass မတူသော အဆောက်အဦများကို ပူးကပ်စွာ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းကလည်း လည့်စရာကြီးပါ။
ယခု ငလျင်နှင့် ၂၀၁၁ခုနှစ် တာဆန်းငလျင်များသည် လူနေထိုင်မှု နည်းပါးသည့် ဒေသများတွင် သာ လှုပ်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာပြည်ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လူနေထူထပ်သောရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့လို နေရာမျိုးတွင် လှုပ်ခဲ့မည် ဆိုက မတွေးရဲစရာပါ။ ထိုသို့ လှုပ်ခဲ့ပါကလည်း လူသူ သေဆုံးမှု နည်းစေရန် အစိုးရမှ ယခုကတည်းက တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အဦများကို ပြည်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ ထပ်မံတည်ဆောက်မည့် အဆောက်အဦများကို သေချာကြီးကြပ်ပေးခြင်း ဖြင့် တိုင်းပြည်၏ အကျိုးကို ထမ်းပိုးပေးနိုင်စေရန် လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။ ထိုအပြင်ရွှေဘိုဒေသတွင် ရှိသော သဖန်းဆိပ်ဆည်ကို လည်းသေချာ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
Reply	Soe November 11, 2012 - 11:35 pm	Thura Tun,why u said like that.Our no 1,isagood guy.if you know something ,opening said.All people at that place,you must be fine,all engineer need to be careful.
Reply	coldlionman November 12, 2012 - 12:16 am	ကမ္ဘာပေါ်က သတ္တဝါ ကျန်းမားငြိမ်းချမ်းကြပါသေစေ
မြန်မာနိူင်ငံပေါ်က သတ္တဝါ ငြိမ်းချမ်းကျန်းမားကြပါစေ
Reply	kochitko November 12, 2012 - 1:45 am	2012.11.13ရက်နေ့မနက်1နာရီခန့်ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားသည်း
Reply	kochitko November 12, 2012 - 1:53 am	2012.11.13ရက်မနက်1နာရီခန့်တရုတ်ပြည်ကျယ်ဂေါင်မြိုတွင်အင်အားအတင့်တင့်ရှိသောငလျင်လှုပ်ခတ်သွားပါသည်။
Reply	true talker November 12, 2012 - 3:19 am	That is the signal to the wicked guys. Better be careful.
Reply	ကိုလူမှန် November 12, 2012 - 10:25 am	မြေငလျှင်ကြီးရယ်ပြည်သူတွေကိုမသတ်ပါနှင့်မကောင်းတဲ့မင်းစိုးမင်းညစ်တွေကိုသတ်ပါဗျာ။
Reply	suhlaingkyaw November 12, 2012 - 10:46 am	သဘာဝတရားကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ ငလျှင်ဒဏ်ကြောင့်လူတွေလည်းသေကြေရတယ်။ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတယ်။ အားတင်းထား
Reply	ကောင်မလေး November 12, 2012 - 3:29 pm	သတိထားသင့်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေအနေနဲ့ပေ့ါ..အခုတော့သူတို့အလုပ်ရပြီပေါ့…
Reply	ကြယ်စင် November 12, 2012 - 3:38 pm	အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဘဲ…တံတားကြီးပြိုပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လမ်းပန်း
Reply	လူးလူး November 12, 2012 - 5:47 pm	သူတပါးအိမ်ကိုမီးရှို့.
သားသေ. မယာသေ အသက်လုပြေး
စားစရမဲ့. ယခုတိုင် ဒုခပေးနေဆဲး
Reply	နေနေ November 12, 2012 - 7:05 pm	ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးလာမယ်
တနေ့သေကြမယ်လူတွေပါ. အာဃာဓ တွေရန်ညှိုးတွေထုထ်သင့်ပါငြီး
Reply	ကောင်း November 12, 2012 - 7:21 pm	မိ့မိ့စကားတလုံးကြောင့်
လူတစုက လူတစုရဲ့မိ့သားစု ရဲ့ဘဝတွေကို
Reply	U Win Maung November 12, 2012 - 7:40 pm	Asacivil engineer,I have alerted and motivated to construct earth-quake resistant buildings in Monywa.If you have difficulty,pls call 098623711.
Reply	Thein Tun Aung November 13, 2012 - 10:01 am	အဝေးမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သိခွင့်ရတာ အရမ်းကျေးဇူး တင်ပါတယ်
Reply	thu ya November 13, 2012 - 10:42 am	ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ခရိုနီတွေအကြိုက်ပါဘဲ နောက်ဆောက်လဲဒီအဆောက်အဦးမျိုးဘဲဆောက်မှာပါ ပညာရှင်တွေပေါပေမဲ့လည်း အသိစိတ်ဓာတ်မရှိသေးသမျှ ခရိုနီတွေရဲ့သြဇာကိုတော့ လွန်ဆန် နိုင်အုန်းမှာမဟုတ်လို့ ဆောက်နေဆဲ ပြန်ဆောက်ဆဲ အဆောက်အဦးတွေအတွက်ကတော့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြပေါ့
Reply	myochit November 14, 2012 - 2:07 pm	့comment ရေးနေတဲ့သူအတော်များများဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုး ကောင်းစေ
ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အသွင်အမျိုးမျိုးဖေါ်ပြီးရေးနေတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်
ကျွန်တော်ရေးချင်တာကတော့ အခုလို သမ္မတ အသစ်
အံ့မခန်းလိလိပါပဲ။ ရှေးအစဉ်အလာအရဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမကောင်းလို့
ပဲလို့အားနာနာနဲ့ပဲပြောရပါတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့သမ္မတဟာ လူတော်တစ်ယောက်ပါ။
-မင်းမဲ့စရိုက်တွေက ဒီမိုကရေစီ ကိုခုတုံးလုပ်လာကြတယ်။
ဆက်ရေးရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ တပည့်မကောင်းဆရာခေါင်း သားသမီးမကောင်းမိဘ
ခေါင်းပဲ ။ ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်ပုံချစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
Reply	ုkyawzaya November 19, 2012 - 7:21 pm	သတင်းထူးတွေတင်ပေးတဲအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ